f ကျောက်ကပ် အကြောင်း | Varnak Thuthang
Varnak Thuthang Blog pin ang no in na muak si ung..... Pathian in Damnak, Tsimnak, Lawhdingnak, Thinnuamnak na pe tasen....
Varnak Thuthang Thu
Mi Ropi te Thuanthu
Kei pupa awntsang
Leivum Lam Theitamnak
Lai lehtu Varnak Thuthang at 9:03:00 pm0Midang Ruat Daan
ကျောက်ကပ် သည် ခန္ဓာကိုယ် တွင် ညာဘက် နှင့် ဘယ်ဘက် နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ရှိသော　စုံတွဲ အင်္ဂါများ ထဲမှ တစ်စုံ ဖြစ်သည်။ ကျောက်ကပ်တစ်လုံး နှင့်လည်း အသက်ရှင်သန်နိုင်သည်။ ကျောက်ကပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ကျောရိုးရှိ ခါးနေရာ၌ ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်စီတွင် နေရာယူ ထားကြသည်။
ကျောက်ကပ် တစ်လုံးစီသည် ပဲကြီးစေ့ ပုံသဏ္ဍာန် ရှိသည်။ ၄င်းတို့သည် ဒေါင်လိုက် အနေအထားဖြင့် ကျောရိုးနှင့် အပြိုင် ရှိနေကြသည်။ အတွင်းဖက်သည် ပဲကြီးစေ့၏ အခွက် ကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး အပြင်ဖက်သည် ပဲကြီးစေ့၏ အခုံးကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ အတွင်းဘက်၏ အလယ်တွင် ကျောက်ကပ်၏ ရိုးတံ အညှာရှိသည်။ ၄င်း အညှာအတွင်းမှ ကျောက်ကပ်သွေးလွှတ်ကြော ၊ သွေးပြန်ကြော နှင့် ဆီးပို့ပြွန်တို့ ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။ ဆီးပို့ ပြွန်မှ တဆင့် ကျောက်ကပ်မှ စွန့်ထုတ်သော ဆီးများကို ဆီးအိမ် အတွင်းသို့ ရောက်စေသည်။ ကျောက်ကပ်တစ်လုံး စီသည် အလျား ၁၀ စင်တီမီတာ ခန့် ၊ အနံ ၅ စင်တီမီတာခန့် နှင့် အထူ ၂.၅ စင်တီမီတာ ခန့် စီရှိကြသည်။ ကျောက်ကပ်တစ်လုံး စီကို အင်္ကျီဝတ် သကဲ့သို့ အခွံတစ်ခုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၄င်း အခွံပေါ် ပတ်ပတ်လည်တွင် အဆီလွှာ တစ်လွှာဖြင့် ထပ်မံ ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ ညာဘက် ကျောက်ကပ်သည် ဘယ်ဘက် ကျောက်ကပ်ထက် အနည်းငယ် ပို၍ နိမ့်သည်။
ကျောက်ကပ်တို့ ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များ ~
၁။ ကျောက်ကပ်တို့သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ အညစ်အကြေးစွန့် စက်များ ဖြစ်သည်နှင့် အညီ မလိုအပ်သည့် အညစ်အကြေး များကို စွန့်ထုတ်ပေးသည်။ အညစ်အကြေး များမှာ ကိုယ်ခန္ဓာ နေရာ ပေါင်းစုံမှ ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝ ဖြစ်စဉ်များမှ ထွက်လာသော အညစ်အကြေးများ၊ ပြင်ပမှ စားသောက်သော ဆိုးဆေးများ၊ ဆေးများ၊ ပိုလျှံနေသော ရေနှင့် အခြား ဓါတ်သတ္တုများကို စွန့်ထုတ်ပေးသည်။
ထို့ပြင် ခန္ဓာကိုယ်၏ လိုအပ်ချက် အပေါ်မူတည်၍ ၄င်း စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများထဲမှ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် စစ်ယူထားပေးသည်။ ဥပမာ အနေဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် ရေဓါတ် ခန်းခြောက်နေလျှင် ရေကို စုပ်ယူ ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အချိုဓါတ် ၊ အသားဓါတ် နှင့် ထုံးဓါတ် တို့ကိုလည်း လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို စုပ်ယူခြင်း ၊ စွန့်ထုတ်ခြင်း ပြုခြင်းအားဖြင့် ခန္ဒာကိုယ်၏ လိုအပ်ချက် များကို ထိန်းညှိပေးသည်။
၂။ ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးဖိအားနှင့် သွေးပမာဏ ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးသည်။
၃။ အငန်ဓါတ်ကို စွန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အရည်ပမာဏ ထုထည်ကို ထိန်း၍ အရည်ကို စွန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အရည်တွင် အငန်ဓါတ် ပျော်ဝင်မှုအားကို ထိန်းသည်။
၄။ ခန္ဓာကိုယ်၏ အချဉ်ဓါတ်(Acid) နှင့် အခါးဓါတ်(Base) တို့ကို ချိန်ခွင်လျှာ ညီမျှ အောင် ထိန်းပေးသည်။
ကျောက်ကပ်တွင် ဖြစ်တတ်သော ပြဿနာများ ထိုကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်၏ အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်း ၊ ထိန်းညှိခြင်း စသော လုပ်ငန်း တာဝန်များကို တရံမလပ် ထမ်းဆောင် နေရသော ရဲဘော်ကြီး ကို ကျောက်ကပ်သည် တစ်ခါတစ်လေ တွင် နေမကောင်းခြင်း စသော ကိစ္စရပ်များနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ လစ်ဟင်းတတ်သည်။ ရဲဘော်ကြီး နေမကောင်းရခြင်း အကြောင်းရင်း များထဲမှ အဓိက ဖြစ်တတ်သော အကြောင်းရင်းမှာ - ဆီးကျောက်တည်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆီးကျောက်တည်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်ကို မူ မရှင်းလင်းတောပါ့။ အချို့သော တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် လူများသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ ကျောက်တစ်လုံး သူဌေးဖြစ်မှန်း မသိ ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဘသားချော ကျောက်တုံးသည် သူရှိကြောင်း အချက်မပေးဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ နေထိုင်လေ့ ရှိသည်။ ဓါတ်မှန် ရိုက်မှသာ မတော်တဆ မောင်ကျောက်တုံး ကို တွေ့ကြရသူများလဲ မနည်းမနော ရှိသည်။ မောင်ကျောက်တုံးသည် ကျောက်ကပ်မှ ဆီးထွက်ရာ ထွက်ပေါက်အထိ လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် မည်သည့် နေရာတွင်မဆို နေထိုင်လေ့ ရှိသည်။ (နေရာမရွေးပါ)။ အဓိက ၄င်း နေထိုင်သော နေရာများမှာ ကျောက်ကပ် ၊ ဆီးပို့ပြွန် တစ်လျှောက် နှင့် ဆီးအိမ် ထဲတွင်ဖြစ်သည်။ ( ဟဲ..ဟဲ ကုန်ပီပေါ့။ ) အကယ်၍ ကျောက်တစ်လုံး သူဌေးဖြစ်နေပါက ကျောက်သူဌေး လက္ခဏာ များဖြစ်သော အလွန်အမင်း ခါးနာခြင်း၊ ရုတ်တရက် ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၊ ဆီးသွားရ ခက်ခြင်း ၊ ဆီး မကုန်ခြင်း ၊ ဆီးသွားစဉ် ရပ်သွား၍ နောက်ပုံစံ တစ်မျိုးပြောင်း၍ ဆီးသွားရခြင်း စသည့် လက္ခဏာများ ပြနိုင်သည်။ အလွန်အမင်း နာကျင် ခံစားရနိုင်သည်။ သို့သော် စိတ်မပူပါနှင့်။ ခွဲစိတ်၍ မောင်ကျောက်တုံး ထုတ်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် ကျောက်သူဌေး၏ လက္ခဏာများ ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်း သွားနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ မောင်ကျောက်တုံး ရောက်နေလျှင် ၄င်း က မည်သည့် ပြဿနာများကို မီးထွန်း ရှာတတ်ပါ သနည်း။
ရေမြောင်းတစ်ခု ရေစီးရေလာ မကောင်းလျှင် အမှိုက်များ စုပုံပြီး ပိုးမွှားများ ပိုမိုပေါက်ဖွား တတ်သကဲ့သို့ ရေမြောင်းနှင့် တူသော ဆီး လမ်းကြောင်းတွင်လဲ ဧည့်သည် မောင်ကျောက်တုံး ရှိနေပါက ရောဂါပိုးများ ပိုမို ပေါက်ဖွားတတ်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်း သည် နဂိုကပင် ရောဂါပိုးများ ကြိုက်နှစ်သက်သော အပန်းဖြေစခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မောင်ကျောက်တုံး ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည် ဖြစ်စေ ၊ ခရီးသွား ရောဂါပိုးများ ဝင်ရောက် အပန်းဖြေပါက ချမ်းတုန် ဖျားခြင်း ၊ ဆီးပူခြင်း ၊ ဆီးကျဉ်ခြင်း ၊ ဆီးအောင့်ခြင်း ၊ ဆီးသွား အားမရခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ မောင်ကျောက်တုံး ရှိပါက ခရီးသွား ပိုးမွှားများသည် ပိုမိုလည်ပတ်လေ့ ရှိကြသည်။ ထို အခါမျိုးတွင် ၄င်း ပိုးမွှားများကို ထိရောက်စွာ ခုခံတွန်းလှန် တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
မောင်ကျောက်တုံး ကို အပြင်သို့ ထွက်အောင် ကုသရာတွင်မူ မောင်ကျောက်တုံး၏ အရွယ်အစား ပေါ်တွင် များစွာ မူတည်သည်။ အကယ်၍ ငယ်သေးလျှင် အလိုလို ကျသွားနိုင်သည်။ ရေများများ သောက်ခြင်း ၊ ဆီးသွားချင်မှန်း သိသည်နှင့် ချက်ချင်း သွားလိုက်ခြင်း တို့ဖြင့် ပျောက်ကင်း သွားနိုင်သည်။ ကြီးလျှင် တတ်ကျွမ်းသူများနှင့် ပြသ၍ ကုသမှု ခံယူသင့်သည်။
၂။ အကယ်၍ မကျိုချက်နိုင်ပါက ကျောက်ချဉ် စသည်ဖြင့် အနည်ကျစေပြီးမှ သောက်သုံးခြင်း။
၅။ ဆီးသွားချင်သည့် ဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်လာပါက မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်မျှ အောင့် မထားဘဲ ဆီးသွားခြင်း ကိုသာ ဦးစားပေး ပြုလုပ်ခြင်း။
၆။ နံနက စောစော အိပ်ယာမှ နိုးသည်နှင့် ရေသောက်ခြင်း။
စသည့် အကျင့်ကောင်း အကျင့်မွန်များကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ဧည့်သည် ကိုကျောက်တုံး လာခြင်းကို တားဆီးနိုင်သည်။
ထိုမှ တစ်ပါးလည်း ရဲဘော်ကြီးသည် နေမကောင်း ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်း များစွာ ရှိကြသေးသည်။ အကယ်၍ ရဲဘော်ကြီး နေမကောင်းဖြစ်၍ ၄င်း၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ကောင်းစွာ မထမ်းဆောင် တော့လျှင် ၄င်း အခြေအနေကို ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဟုခေါ်ကြသည်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ရဲဘော်ကြီး တွင် ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။ သွေးတိုး ၊ ဆီးချို နှင့် တီဘီ သူငယ်ချင်းတစ်စု ကြောင့်လဲ ရဲဘော်ကြီး ရောဂါ ရနိုင်သကဲ့သို့ မောင်ကျောက်တုံး ကြောင့်လဲ ရဲဘော်ကြီး ရောဂါ ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ရဲဘော်ကြီး သည် သေဆုံးပျက်စီး သွားနိုင်သည်။
ရဲဘော်ကြီး သည် ရောဂါဖြစ်စတွင် သူ၏ လုပ်ငန်းများကို မလုပ်တော့သဖြင့် ဆီးများလာခြင်း ၊ ညဘက် ဆီး ခဏခဏ သွားလိုခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ နံနက်စောစော အိပ်ယာမှ ထစတွင် မျက်လုံး တစ်ဝိုက် ဖောယောင်ရာမှ တစ်ကိုယ်လုံး ဖောယောင်ခြင်း တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ၄င်း အခြေအနေတွင် အချိန်မီ ဆရာဝန် များထံ ပြသ၍ လိုအပ်သည့် ကုသမှု ကို ခံယူသင့်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် မှ ရဲဘော်ကြီးကို ဂရုမစိုက်လျှင် ဆီး လုံးဝ မသွားနိုင်သည် အထိ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် မိမိ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် တွင် မိမိအား အစဉ်အမြဲ ကူညီနေသော ရဲဘော်ကြီး ကျောက်ကပ် ကို စောင့်ရှောက်ရန် အတွက် ~
၂။ ဆီးသွားခြင်းကို ဦးစားပေးပါ။
၇။ ရဲဘော်ကြီး နေမကောင်းကြောင်း လက္ခဏာ များဖြစ်သော ဆီးများလာခြင်း ၊ ညဘက် ဆီး ခဏခဏသွားခြင်း ၊ ဆီး ကျန်ခြင်း ၊ ဆီးပူ ဆီးအောင့် ခြင်း ၊ ဆီး သွားရခက်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်လာပါက တတ်ကျွမ်းသူများနှင့် စောလျှင်စွာ ကုသမှုခံ ယူရင်း မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ပါ။
အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ၊ ကျန်းမာခြင်း သည် လာဘ်တစ်ပါး ခန္ဓာကိုယ် အသီးသီး ပိုင်ဆိုင်ထားကြသော အားလုံးသော သတ္တဝါများ ကျန်းမာ၍ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ချမ်းသာ သူများ ဖြစ်ကြပါစေ။ မိမိ ကျန်းမာသကဲ့သို့ လူတိုင်း ကျန်းမာအောင် ကူညီနိုင်ကြပါစေ။ နေမကောင်းသူများကို စေတနာဖြင့် ပြုစုနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေ။
Na ruat daan
Varnak Thuthang Tumtah
1. Bengvarnak le theikaunak ngah
thei nak tuh
2. Phunpi tsa thilpha puah nak tuh
3. Kei awnamang hem munkhat ah
kutlendun dang theinak tuh
4. Sahnung, Angnung thu le lungse thu
theitseardun thei nak tuh
5. Leivum San hawhnak ah kei lun thei,
mi kei bang thei nak tuh
6. Kei lai kilkhawi dang nak tuh
7. Pathian thu thaw kei khangso thei
VT Blog pantu te ram
Varnak Thuthang Blog
Varnak Thuthang FB fan page
See you again on Varnak Thuthang Blog
Varnak Thuthang | © 2012 Design by Varnak Thuthang.